छालामा यस्तो निशान देखिएमा हुनुहोस् होशियार ! लाग्नसक्छ सोरायसिस रोग – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/छालामा यस्तो निशान देखिएमा हुनुहोस् होशियार ! लाग्नसक्छ सोरायसिस रोग
काठमाडौँ । जाडोले अब बिस्तारै ढकढक्याउँदैछ र यस मौसममा मानिसहरु छालाको सुख्खापनबाटबाट चिन्तित हुन्छन्। एकै साथ सोरायसिस बिरामीलाई यस मौसममा धेरै समस्याहरू छन्। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, म तपाईंलाई बताउँछु कि सोरायसिस छालाको रोग हो। यदि छाला तपाईको कुहिनो, घुँडा, घाँटी, टाउकोमा सूख्खा हुन्छ भने यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् किनकि यी लक्षणहरू पनि यस छालाको रोगले गर्दा हुन सक्छ। करोड मानिस यस रोगबाट प्रभावित छन्। अक्टूबर २ लाई यस रोगको जागरूकताका लागि विश्वभरि सोरायसिस दिवसका रूपमा मनाइन्छ। आउनुहोस् हामी यसलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरौं। यदि तपाईं यसको शिकार हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले खानेकुरा र पेय पदार्थको ठूलो ध्यान राख्नु पर्छ।
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुनेछ कि यो सोरायसिसको समस्या हो ?
यदि छालामा रातो सुक्खा कडा दाग, छाला उक्किने र चिलाउने हुन्छ, भने यो छालरोग हो। धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ कि यो छाला संक्रमण वा कस्मेटिक समस्यासँग सम्बन्धित छ जबकि यो सोरायसिस विपरित हो।
इम्युनिटी सिस्टमसँग हुन्छ यसको कनेक्सन
कमजोर प्रतिरोध क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई यस समस्याले आफ्नो शिकार बनाउँदछ। वास्तवमा सोरायसिस रोग तब मात्र हुन्छ जब प्रतिरक्षा प्रणालीले स्वस्थ कोशिकालाई आक्रमण गर्दछ तर आत्तिनुहुँदैन किनकि सही खाना र जीवनशैलीका नियमहरूले यस रोगलाई नियन्त्रण गर्नेछ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सबैभन्दा पहिले, सोरायसिस रोगमा के खानु उपयुक्त हुन्छ ?
यसमा तपाईंले गहुँ, चामल, जौ, मूंग र दाल खानु, तरकारीमा परवल लौका, अनार र जायफल, काँचो, लसुन, अदुवा र फलहरू खानुपर्दछ। एकै साथ मसला, हिंग, कालो नुन, जीरा, लसुन, अजवाइन र मन तातो नुनको पानी पिउनुहोस् ।
सोरायसिस रोगमा के खान हुँदैन ?
यसमा सब भन्दा ठूलो त्याग भनेको तेल, मसालेदार खाना, चिकेन, अचार तेल, फास्ट फूड र जंक फूड खानु हुँदैन। यस बाहेक, धान, मईदा, उडु दाल, मटर र चना नखाउनुहोस्। साथै, दही, माछा, गुड़, दूध धेरै नुन, चिसो पेय पदार्थहरू, मिक्स पानी पिउनुहुन्न।
घरेलु उपचारको बारेमा कुरा गर्ने हो भने, बिहान उठ्नुहोस् खाली पेटमा दाँत सफा गर्नुहोस् र १(२ गिलास मनतातो पानी खाली पेटमा पिउनुहोस् र बिहानको खाजामा अमला वा एलोभेराको रस पिउनुहोस्।
केहि चीजहरू त्याग्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ
योग र ध्यान गर्नुहोस्। योगमा, कपालभन्ती, बहुप्रणाया, अनुलोम एन्टोनियम, भ्रामरी, उदगीठ, उज्ज्या, प्रणव जप, पश्चीमोत्तनसाना, हलासाना, मर्कटासन, सर्वगंगासन गर्नु धेरै लाभदायक हुन्छ।
दिनमा सुत्न नहुनुहोस्।ताजा र हल्का तातो खाना खानुहोस्।खाना पछि हल्का पैदल यात्रा गर्नुहोस्।हल्का हृदय व्यायाम जारी।तनावमुक्त हुन कोसिस गर्नुहोस्।छालालाई सूर्यको किरणबाट बचाउनुहोस्। यूरिन र शौच रोक्नुहोस्।